မြန်မာပြည်မှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကာလမတိုင်မီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် အသေများခဲ့ပေမယ့် အခု ၂၀၁၅ မိုးသည်းထန်၊ မြစ်ရေလျှံ၊ တမံဖောက်မှုတွေကြောင့် ရေလျှံနေတဲ့အတွက် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အတော်များများမှာ အသေအပျောက်က နာဂစ်ကိုမမီပေမယ့် ပျက်စီးရှုံးဆုံးမှုတွေက နာဂစ်ဘေးထက်ပိုဆိုးမယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ခံ အင်ဂျင်နီယာတဦးက ပြောပါတယ်။
၂ A man rows his boat by the entrance signboard of Kalay township submerged in water, in Sagaing, Myanmar, Sunday, Aug. 2, 2015. Heavy rains in Myanmar have caused more flooding, devastating several townships and forcing more than 18,000 people into tempora
၃ KALAY, Myanmar Dogs stand on the roof ofahome inaflooded village at Kalay township at Sagaing division, August 2, 2015. Storms and floods have so far killed 21 people, with water levels as high as 2.5 metres in Sagaing and 4.5 metres in western Rakhin
၄ An aerial view of the flooded Kalay township at Sagaing division, Myanmar, Aug. 2, 2015. Water levels have reached as high as 2.5 meters in Sagaing and 4.5 meters in western Rakhine state, according to the government, which declared four regions disaster zones.
၅ Myanmar soldiers unload relief items fromaplane at Kalay airport in Kalay township in Sagaing, Aug. 2, 2015.